I-Redmi K20 yaphula i-AnTuTu kunye ne-Snapdragon 855 enamandla | I-Androidsis
I-Redmi K20 yaphula i-AnTuTu kunye ne-Snapdragon 855 enamandla
UXiaomi uye wacaphuka ngokushiya iflegi entsha ye OnePlus 7 ProUkuthumela izaziso zokufika kwabo bangababulali, Redmi K20.
Ngoku uMphathi Jikelele weRedmi uLu Weibing uqinisekisile ukuba i-K20 izakubonisa Snapdragon 855 isiphelo esiphakamileyo, into ebikade icingelwa kwakudala kwaye ichaziwe kwi Uvavanyo lwe-AnTuTu esizibonisa apha ngezantsi. Eli iya kuba lixesha lokuqala uRedmi emkile kumgama ophakathi weeprosesa kunye neenkcazo.
Amanqaku e-K20's AnTuTu atyhilwe nguLu kwaye aphezulu kakhulu, Kwane-smartphone exhaswa nguSpapdragon 855.
Imodeli ye-K20, enegama elibhalwe 'Raphael', ebhalisiweyo Amanqaku angama-458.754 kwisiseko se-AnTuTu. Oku kuphezulu ngokungaqhelekanga kuba uninzi lweefowuni ze-Snapdragon 855 zifumana ngaphantsi kwe-400K kwibhentshi elifanayo.
Ukukunika umbono othile, Siyi9, yenye yeeflegi eziphezulu kakhulu kwi-AnTuTu, inamanqaku aphakathi angama-370,00. Ngaphantsi kakhulu kunenani esele likhankanyiwe.
Njengoko iRedmi ikulungele ukungena kwintengiso yeflegi, asinakukunceda kodwa sizibuze ukuba iza kuma phi ngokwexabiso. I-K20 bekufanele ukuba ilandelayo I-POCO F2, kodwa kuyacaca ukuba ayizukuba njalo njengoko inkampani iqhuba iintengiso eIndiya (apho iPOCO ithandwa kakhulu) kunye nomgca wethegi ye-K20. Ke oku kunokuba yinto enokutshintsha indawo yeflegi yeXiaomi, ngakumbi kwintengiso efana ne-India.
Iiflegi zikaXiaomi khange zithengise kakuhle kule marike, ke ixabiso eliphantsi (kodwa libiza kakhulu kunePOCO) inokuba sisisombululo. Kodwa oku kuphelisa nasiphi na ithemba lokuba iMi 9 uthotho luzakufika eIndiya ngokusemthethweni.
(I-Fuente: 1 y 2)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi K20 yaphula i-AnTuTu kunye ne-Snapdragon 855 enamandla
I-United States inokukuthintela ukungena kweemveliso zeHuawei